Home Wararka Kenya oo ku baaqday in la difaaco xuduudaha Kenya iyo Soomaaliya
Kenya oo ku baaqday in la difaaco xuduudaha Kenya iyo Soomaaliya
Taliyaha Ciidanka Difaaca Kenya (KDF), Jeneraal Robert Kibochi ayaa sheegay in Kenya iyo Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xuduud wadaag ah, sidaas darteedna loo baahan yahay in si wadajir ah xal loogu helo muranka ka dhaxeeya.
“Soomaaliya iyo Kenya waa deris, waxaa loo baahan yahay in aan ku heshiinno inaan ku wada noolaanno si wadajir ah, sababtoo ah rumee ama ha rumeysan, Carruurta Soomaaliyeed waxay aadaan iskuullada Mandheera, oo ay daryeel caafimaad ka helaan”, ayuu yiri Kibochi.
wuxuu sheegay in haddii wadahadalka labada dal uu fashilmo, in ciiddamada difaaca Kenya xaqiijin doonaan in taako ka mid ah dhulka Kenya loo oggolaan doonin in lagu daro Soomaaliya.
Jeneraal Robert Kibochi wuxuu sheegay in Kenya ay ka hortagi doonto dhammaan khataraha kusoo wajahan, oo ay ku jiraan kuwa ka imaanaya dacaayadaha iyo macluumaadka baraha bulshada.
Dowladda Kenya ayaa aad uga caraysan go’aankii bishii hore kasoo baxay maxkamadda ICJ, taasoo lagu go’aamiyay in Soomaaliya ay leedahay dhul baddeedka labada dal ay ku muransanaayeen.